Ngosipụta vidiyo nke ụdị ọhụrụ nke ụgbọ ala kwụrụ ọtọ nke Tesla | Akụkọ akụrụngwa
Ọnwa ole na ole gara aga, onye na-emepụta ụgbọ ala Tesla wepụtara mmelite ya na ngwanrọ ya nke mere ka ịkwọ ụgbọala na-anya onwe ya ebe mmekọrịta onye ọrụ dị mkpa n'ọtụtụ oge. Ma ịnya ụgbọ ala nke onwe ọ bụ nzọụkwụ mbụ nwere ike ịnye ọkwọ ụgbọala kwụ ọtọ, na-akwọ ụgbọala nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya ma hụ otú o si arụ ọrụ, Tesla ezigala na weebụsaịtị ya vidiyo, ya na egwu nke Benny Hill Show, nke anyị nwere ike ịhụ otu otu Tesla si eme njem kpamkpam na-enweghị itinye aka na onye ọrụ.
Ma, ihe ọ na-akpọ n'ezie, e wezụga ịhụ otú ụgbọala ahụ na-anya kpamkpam n'ụzọ zuru ezu na-enweghị ọrụ aka, bụ igwefoto atọ eji arụ ọrụ a na nke a na-achọpụta gburugburu ebe gbara ya gburugburu na ihe niile nwere ike ịbụ ihe egwu ịnya ụgbọ ala. Dị ka anyị nwere ike ịhụ na onyonyo nke na-eche isiokwu a na vidiyo agbakwunyere, ụgbọala a nwere ese foto atọ: otu ihu na azụ abụọ nke na-ezo aka n'akụkụ.
Igwefoto ndị a nwere ihe mmetụta ndị na-achọpụta ụdị ihe mgbochi ma chọpụta ya na agba dị iche iche. Akara ahịrị nwere agba pink, a na-eji odo odo maka akara ngosi okporo ụzọ, a na-eji ụgbọ ala na ndị na-agagharị agagharị na ụgbọ ala nwere agba nwere acha anụnụ anụnụ ebe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ihe ụgbọala ga-ezere. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ihe nke ọ bụla na agba pụtara, na ala nke vidiyo anyị na-ahụ akụkọ mgbe ochie ga-enyere anyị aka ịmata ihe niile ịnya ụgbọ ala Tesla na mbipute 2.0 nọ n'ụzọ.
O doro anya na oge ọ bụla ọ bụ nso ka anyị nwee ike ịbanye n'ụgbọala dị ka a ga-asị na ọ bụ tagzi ka anyị gwa ya ebe anyị chọrọ ịga, na-enweghị mmekọrịta anyị na ya oge ọ bụla, ebe ọ bụ na dị ka anyị na-ahụ na mgbasa ozi, o nwekwara ike ịdebe onwe ya, ọ bụ ezie na ọrụ a adịla ogologo oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngosipụta vidiyo nke ụdị ọhụrụ nke ịkwọ ụgbọala kwụ ọtọ nke Tesla
Ndị mmekọ Amazon na Fiat iji ree ụgbọ ala